Halabuurka: Povidone iodine 100mg / ml Tilmaamo: Povidone iodine xalka waxay leedahay microbicidal waxqabadyo baaxad weyn oo daboolaya gram togan iyo bakteeriyada xunxun oo ay kujirto nabar u adkeysta antibiyootigyada, waxay kaloo dabooshaa fangaska, protozoa, finanka iyo fayraska. Firfircoonaanta 'povidone iodine' xal looma saameeyo dhiig, malax, saabuun ama bile. Xalka 'povidone iodine' waa mid aan dhib lahayn oo aan xanaaq u lahayn maqaarka ama xuubka xabka oo si fudud looga dhaqi karo maqaarka iyo gogosha dabiiciga ah.
Kaliumpermanganat budada kaar oo Fudud leh Cudurka Firfircoon
Waxyaabaha ugu Weyn ee Walxaha Potromosta-ha ee Dhirta, Sodium chloride Character Shaygaani waa budada gaduudka cas ee khafiifka ah. Ficil farmasiga Shaygaani wuxuu si joogto ah u soo saaraa astaamaha hypochlorous, oksoolojiyadda cilmiga dabiiciga ah, oksidaynta iyo koloriin ku darista biyaha iyada oo loo marayo falcelinta silsiladda, waxay faragalin ku sameysaa dna iyo cillad-barar of pathogens, waxayna sababaan borotiinka 'pathogens' si loo xoojiyo loona hagaajiyo, taasina waxay faragelineysaa waxqabadka cudurka 'pathogen' nidaamka enzyme iyo saameyn ku yeelashada dheef-shiid kiimikaadka. kordhin ...